Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotany. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 7, 2012 Laisser un commentaire sur Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotany.
» Ary hoy kosa Jesosy taminy: Hataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe: « Mpanao fanafody, sitrano ny tenanao »: izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin’ny taninao koa. Ary hoy koa Izy: lazaiko aminareo marina tokoa: tsy misy mpaminany ankasitrahana ao amin’ny taniny » Lioka 4:23-24
Ny fanadiovana ny olona amin’ny fahotana nataon’Andriamanitra azy no ahazoany ny fiainana mandrakizay. Ny ràn’i Jesosy Kristy no entina hanadio- vana antsika, ary avy eo afaka mitafy ny Fahamarinany: ny Fahamarinany no tafian’izay nodioviny tamin’ny Ràny.
Raha ny nofo ihany no hijerentsika an’i Jesosy dia tsy ho azontsika ny famonjena entiny. Ny tian’Andriamanitra amintsika dia ny hiainoantsika ny Teniny ka hakatoavantsika izany, dia hamoa be isika araka ny sitrapony!
Maro no fitaovana entin’Andriamanitra hitenenana amintsika, ary ao anatin’izany ny olony izay manaiky marina ny famonjeny, ary manaiky irahiny.
I Elia dia olona tahaka antsika ihany ary izy nahery nivavaka mba tsy ilatsahan’ny ranonorana, dia tsy nilatsaka tamin’ny tany ny ranonorana telo taona sy enimbolana, ary tamin’izany dia maro ny mpitondratena teo amin’ny Isiraely, nefa tsy mba nirahina ho any amin’ny anankiray tami’ireo i Elia, fa ho any Zarefata any amin’ny tany Sidona ihany dia hoa any ami’izay vehivavy mpitondra tena. Ny fahitantsika ny olona iray isan’andro, na ny fahalalantsika ny momba azy dia mametra antsika tsy hino fa azon’Andriamanitra ampiasana izy. » Ny tsy finoantsika dia misakana an’ Andriamanitra ny amin’fanatanterahana ny famonjena tokony ho antsika.
I Elia izay fitaovana ihany teo ampelatana’Andriamanitra dia tsy nasain’Andriamanitra nanao fahagagana tamin’ireo mpitondratena tao amin’ny Isiraely, fa tao amin’ny mpitondratena tao Zarefata any amin’ny tany Sidona no nitondran’Andriamanitra azy.
Ny fomba andraisana ny irak’Andriamanitra dia tsy ny mahanofo azy no tsikeraintsika, satria olona azo tsikeraina ihany izy.
Ny fahitan’ny mpiaramonina an’i Jesosy tamin’ny fianakaviana nipoirany dia fianakaviana tsotra, dia i Josefa sy Maria, ary mpandrafitra ihany moa i Josefa. Efa voafariparitry ny mpiaramonina ny momba an’i Jesosy, ka izay famaritana izay no entiny hisandana ny mety ho zavatra vitany! Izany mandrakariva no mitranga eo amin’ny maha-olombelona. Voafetra ny fomba fijery, ary dia fehezina amin’izany koa no mety ho maha izy azy ny hafa: « Tsy ilehity va ilay Zanaky ny mpandrafitra? »
Izay ihany no ahafantarany an’i Jesosy. Ary dia ferany amin’izay koa ny maha Izy Azy an’i Jesosy. Ary izay rehetra nambaran’i Jesosy dia tsy henony sy tsy fantany satria izay ihany no ao antsaina manajamba azy: tsy ilehity va ilay zanaky ny mpandrafitra!
Raha mbola ny feon’i Satana no miteny ao anatintsika dia tsy mahita mihitsy ny hatsaran’ny asan’Andriamanitra isika ary izao ihany no feo henontsika : Tsy ilehity va ilay Zanaky ny mpandrafitra? Fa Ilay feon’Andriamanitra miteny amintsika hoe:
» Ity no Zanako malalako , izy no henoy! » Marka 9:7
Mila mangataka sofina avy amin’Andriamanitra isika ahazoantsika mihaino izay tena avy Aminy, mba ahazoantsika mihaino na ny hoe :ilehity no Zanaky ny mpandrafitra na Ity no Zanako malalako; Izy no henoy!
Raha eo anatrehantsika Jesosy:Iza no miteny amintsika hoe ilehity no Zanaky ny mpandrafitra? Ary Iza no miteny amintsika hoe Ity no Zanako malalako; Izy no henoy?
Lazaiko aminao fa raha tsy mahay manavaka ny feo tena izy amin’ireo feo roa ireo isika , dia ho very mandrakizay!
Mampivarahontsana ny mandinika ny tantara ao amin’ny Soratra Masina ny amin’ilay mpanankarena nijaly tany amin’ny fiainan-tsi-hita nitaraina tamin’i Abrahama hoe: Mangataka aminao aho ry raiko: mba iraho Lazarosy hankany amin’ny tranon’ny raiko, (fa manana rahalahy dimy aho) mba hilaza tsara aminy, fandrao mba ho tonga aty amin’ity fiainana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy: Manana an’i Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka hiaino ireo izy. Fa hoy kosa izy: tsia ry Abrahama, raiko, fa raha misy miala amin’ny maty hankany aminy, dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy mihaino an’i Mosesy sy ny mpaminany izy, dia tsy hety hiaino izy, na dia misy mitsangana amin’ny maty aza! (Liok 16: 27-31)
Aoka isika tsy ho variana amin’ny maha nofo ny olona irahin’Andriamanitra fa hihaino tsara kosa ny Teniny, ny Teniny mampibebaka antsika .Fa olona tahaka antsika ihany no ampiasan’Andriamanitra, tahaka ny mpaminany, ka tsy hijery na inona na inona ny aminy isika afa tsy ny Tenin’i Jesosy Kristy izay hitondra Fiainana ho antsika!
Aoka tsy ho marina amintsika io Teny eo ambony io hoe: tsy hety hiaino izy, na dia misy mitsangana amin’ny maty aza.
Dieny mbola velona, afaka mihaino ny afatry ny Tenin’ Andriamanitra ary isika, dia mitaona antsika hibebaka ny Teniny. Tsy tian’Andriamanitra ny ahafatesantsika amin’ny fahotantsika, raiso ny hafatra ampitondrany ny Teniny amin’ny alalan’ny mpanompony, amin’ny alalan’ny fitaovana marosamihafa, ary na dia ny « vato » aza mety asainy hiantsoantso: Ny anton’izany rehetra izany dia ny fiala-nenin’Andriamanitra amintsika!
Publié parfilazantsaramada septembre 7, 2012 Publié dansUncategorized
NY FIEREMAN’NY OLONA, NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA